"Anigu Antoine Greizmann Kulamaan Soo Saxeexdeen Barcelona, Waxa Jira Ciyaartoy Kale Oo Si Ka Wanaagsan Ugu Soo Baxaya" - Gool24.Net
“Anigu Antoine Greizmann Kulamaan Soo Saxeexdeen Barcelona, Waxa Jira Ciyaartoy Kale Oo Si Ka Wanaagsan Ugu Soo Baxaya”
Tababarihii hore ee kooxda Barcelona ee Carles Rexach ayaa gabi ahaanba kasoo hor jeestay saxeexa lagu wado inuu qabsoomo suuqa xagaagan ee ay Barcelona ku doonayso weeraryahanka kooxda Atletico Madrid ee Antoine Greizmann.
Greizmann ayaa dhawaan sheegay inuu ka tagayo kooxda xagaagan si uu meel kale uga ciyaaro balse waxaan wali kala caddayn kooxda uu ku biiri doono.
Lacagta lagu burburin karo heshiiska Greizmann ee haatan ayaa ah 200 Milyan balse bisha July ayuu noqon doonaa 120 Milyan waxaana kooxaha inta ugu badan lala xidhiidhinayo hoggaanka u haysa Barcelona.
Si kastaba, Waxa jira codad badan oo xataa qaarkood yihiin gudaha Barcelona oo diidan saxeexa Greizmann waxaana kamid ah tababare hore Carles Rexach.
Rexach ayaa sheegay in mar uu madaxweynuhu waydiiyay saxeexa Greizmann uu u sheegay inuusan isagu lasoo saxeexdeen haddii uu Barca joogo.
Tababarahan ayaa ku dooday inuu ka xanaaqay muuqaalkii uu Greizmann hore ugu shaaciyay inuusan ku biirayn Barcelona isla markaana ay jiraan ciyaartoy kale oo kaga haboon inay Barca bedelkiisa ula soo saxeexato.
Carles Rexach ayaa yidhi “Madaxweynuhu imuu waydiin fikradayda laakiin maalin ayuu hore ii weydiiyay waxaanan u sheegay in aanan lasoo saxeexdeen Greizmann”
“Muuqaalkii uu sameeyay ayaa i cadho galiyay aniga kaddibna waxaan dareen ciyaareed ku sheegay inuu ka ciyaaro boos lamid ah Messi”
“Waxaan filayaa inay jiraan ciyaartoy kale oo si ka wanaagsan ugu soo bixi lahaa